မျှော် ... - Clicker Nux
... ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ အရေးလေးများ ...
မျှော် ... Reviewed by နှင်းလူ on 11:30:00 PM Rating: 5
စာ ဆောင်းပါး အမှတ်တရ
တစ်နေ့ ကွတ်ခိုင်က သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့် ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ သူတို့ မြို့က အင်တာနက်လိုင်းများ အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ကြွားသဖြင့် ကိုယ့်မြ...
တစ်နေ့ ကွတ်ခိုင်က သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့် ဖုန်းပြောဖြစ်တော့ သူတို့ မြို့က အင်တာနက်လိုင်းများ အလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်း ကြွားသဖြင့် ကိုယ့်မြို့နှင့် ယှဉ်ကာ မနာလိုဖြစ်ရသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့မြို့က အင်တာနက်လိုင်းကတော့ အများအားဖြင့် သာမန်သတင်းဖတ်၊ ဖွန်ကြူ ဖွန်ချက်ဖို့လောက်သာ သုံးလို့ရသည်။
ဖုန်းပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူမို့ ဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ရာ firmware များ app & game များဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူဖို့လောက်တော့ လိုင်းက မကောင်း။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က အင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရူးသွပ်သူမို့ ကိုယ့်မြို့က နှေးကွေးသည့် အင်တာနက်လိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာခဏပေါက်ကွဲမိသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီများကို ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ဆဲသည့်အခါ ဆဲမိသည်။ ကျွန်တော်လိုချင်သည့်အခြေအနေနှင့် လက်ရှိရနေသည့် အခြေအနေက ကွာခြားနေသည်ကိုး .... ဒီတော့ ကိုယ်စိတ်ထင်တိုင်း လုပ်ခွင့်မရသည့်အခါ အဲ့လိုပေါက်ကွဲမိသည်။ ထိုအခါ တစ်ခါကတွေ့ခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံခြားသားသတင်းထောက်ကြီးကို သွားသတိရမိသည် ...
မန္တလေးမှာ ဘွဲ့သွားယူစဉ်က ဆွိဇာလန်က သတင်းထောက်ဦးလေးကြီးတစ်ဦးနှင့် စကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကိုဆန်း နှစ်ယောက်သား မန္တလေးသို့ ဘွဲ့ယူဖို့ ရောက်လာသော်လည်း ဘွဲ့ယူအခမ်းအနားအကြိုလေ့ကျင့်မှုကို မတက်ဖြစ်ကြ။ နေခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသော်လည်း တစ်ခါမျှမရောက်ဖူးသဖြင့် နှစ်ယောက်သား မန္တလေးမြို့ထဲ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားနေခဲ့ကြသည်။ နှစ်ယောက်သား ဘွဲ့ယူရမည့် ရက်ကလည်း မတူဘဲ ကိုဆန်းက ကျွန်တော့်ထက်အရင် တစ်ရက်စောပြီး ဘွဲ့ယူအခမ်းအနားတက်ရသည်။
ကိုဆန်းဘွဲ့ယူသည့်နေ့တွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပရာ တက္ကသိုလ်သို့ ကျွန်တော်က အဖော်အဖြစ်လိုက်ပါသွားသည်။ အကြိုလေ့ကျင့်မှုကိုမတက်ခဲ့သဖြင့် အခမ်းအနားတက်လာသူများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ကန့်သတ်ထားခြင်းကို ကျွန်တော်မသိခဲ့၊ အင်္ကျီတီရှပ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်လျှက်နှင့် လိုက်ပါသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပရာ တက္ကသိုလ်သို့ရောက်သော် ခန်းမအတွင်းသို့ ကျွန်တော်ဝင်ခွင့်မရပေ။ တစ်ယောက်တည်း ခန်းမအပြင်ဘက်တွင် ယောင်လည်လည်နှင့် စောင့်နေခဲ့ရသည်။
ထိုစဉ် နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်နှစ်ဦးရောက်ချလာသည်၊ တစ်ဦးက အမျိုးသမီး၊ ကျန်တစ်ဦးက အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်က ခန်းမအပြင်တွင် စောင့်နေသော ဆရာမများ၊ ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့် စကားသွားပြောသည်။ သူတို့ ခန်းမအတွင်းဝင်၍ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို ရိုက်လိုကြောင်းပြောသည်။ ဝင်ခွင့်မရသဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရသည့် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးကို သူမ၏ ကင်မရာပေးကာ သွားရိုက်ခိုင်းသည်။ ကျန်အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ ကျွန်တော့်ဘေးနားလာထိုင်သည်။
တစ်ခါမှ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးနှင့် ဤမျှ နီးနီးကပ်ကပ်မတွေ့ဖူးသည့်အပြင် အင်္ဂလိပ်လိုကလည်း အင်မတိအင်မတန်ညံ့ဖျင်းသမို့လည်း နှုတ်ဆက်ရမှာ ခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်မိသည်။ သို့ပေမဲ့လည်း မပီကလာ ပီကလာဖြင့် အရဲစွန့်ကာ ဘယ်ကလဲဟု အပြုံးနှင့် မေးလိုက်မိသည်။ ဆွိဇာလန်ကပါဟု သူက ပြန်ဖြေသည်။ စကားအနည်းငယ်ပြောပြီးနောက် ဆွိဇာလန်သားကြီးက သတင်းထောက်ပီသစွာဖြင့် ဘွဲ့သဘင်အကြောင်း မေးမြန်းပါလေတော့သည်။ ဘွဲ့သဘင်ခန်းမက မည်မျှအကျယ်အဝန်းရှိကြောင်းမေးသည်၊ လူဦးရေမည်မျှဆန့်ကြောင်းမေးသည်၊ ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့အကြောင်း မေးသည်၊ ဘွဲ့ယူအခမ်းအနားအကြိုလေ့ကျင့်မှုကို မတက်ခဲ့သဖြင့် ခန်းမကြီး၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို ကျွန်တော်မမြင်ဖူးချေ၊ ဘွဲ့ယူမောင်မယ်မည်မျှဆန့်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်တော်မသိ၊ အကယ်၍ သိခဲ့ပါကလည်း သူနားလည်အောင် ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်မည် မထင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်က အင်္ဂလိပ်စာညံ့သဖြင့် ကောင်းစွာမရှင်းပြနိုင်သည့်အတွက် ဝမ်းနည်းပါကြောင်းပြောတော့ သူကပြာပြာသလဲနှင့် အို ... သင့်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ ကောင်းပါတယ်ဟု ကြင်ကြင်နာနာနှင့် နှစ်သိမ့်ရှာပါသည်။
သို့နှင့် နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော့်အကြောင်းမေးသည်။ ဘာအထူးပြုနှင့် ဘွဲ့ယူမှာလည်း၊ ဘွဲ့ရပြီးနောက် ဘာလုပ်မှာလဲ လျှောက်မေးသည်၊ ဒီတစ်ခါလည်း ကျွန်တော့်မှာ ဖြေရတာ ခပ်တွန့်တွန့်ရယ် ... မြန်မာစာအဓိကနှင့် ဘွဲ့ယူမည့်သူ၊ လုပ်သည့်အလုပ်က ဖုန်းပြုပြင်ရေး .... အတော့်ကို လိုက်ဖက်ဆက်စပ်မှုရှိပါပေသည်။
သို့နှင့်တစ်ဖန် အကြောင်းအရာက မြန်မာပြည်၏ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအကြောင်း ရောက်သွားသည်။ သူက ဖုန်းပြုပြင်သည့်အလုပ်သည် ကောင်းကြောင်း၊ ယခုအချိန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူ အလျှင်အမြန်တွင်ကျယ်လာသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်း ပြောသည်။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်တို့ဒေသ၌ ဖုန်းလိုင်း မည်မျှညံ့ဖျင်းကြောင်း အတင်းတုတ်သည်။ သို့ပေမဲ့ သူကတော့ ကျွန်တော်နှင့် ရောယောင်ကာ မြန်မာပြည်၏ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကောင်းမပြောပါ။ သူက "အိုး ... တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာမှာပါ ... တစ်ဆင့်ချင်းပေါ့၊ အရင်က လူတိုင်းဖုန်းကိုင်နိုင်ဖို့ အတော့်ကို ခက်ခဲခဲ့တယ်၊ အခုတော့ လူတိုင်းဖုန်းအသုံးပြုလာနိုင်ပြီ။ ဒီလိုပဲ တစ်ဆင့်ချင်းလာမှာပေါ့။ တစ်ဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာမှာပါ" ဟု အားပေးစကားပြောပါသည်။ ဒီတော့မှပဲ အကောင်းမမြင်တတ်သည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်ရကောင်းမှန်းသိလာသည်။
အမှန်တကယ်လည်း သတင်းထောက်ကြီးပြောသည့်အတိုင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုက အရင်ကထက် အများကြီး ပိုကောင်းလာပါသည်။ အခုဆိုရင် အလွန်ချောင်ကျသော ကျွန်တော့်တို့မြို့လေးမှာ MPT နှင့် Telenor ဝန်ဆောင်မှုရနေပြီ။ အစောပိုင်းတုန်းက ဖုန်းပြောရ သိပ်အဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖုန်းပြောသည့်အခါ လိုင်းမကောင်းသဖြင့် အသံမကြည်ခြင်း၊ အသံပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ခြင်းများ သိပ်မကြုံရတော့ချေ။
အရင်က ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးရတာ လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့၊ ထို့နောက် MECtel ဝန်ဆောင်မှုရပြီးနောက် ဖုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးရအဆင်ပြေလာ၏။ သို့ပေမဲ့ အပြည့်အဝတော့ မဟုတ်ခြေ။ MEC လိုင်းက တစ်လလျှင် ဆယ်ရက်ခန့်သာ လိုင်းဖွင့်သဖြင့် ရက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သုံးခဲ့ရသည်။ (ယခုအချိန်မှာတော့ MEC လိုင်းက လုံးဝမဖွင့်ပေးတော့ပါ။)
ထို့နောက် MPT လိုင်းကောင်းလာသဖြင့် MPT ဖြင့် အင်တာနက်သုံးလာနိုင်သည်။ အစောပိုင်းလိုင်းဖွင့်တုန်းကသာ အင်တာနက်လိုင်းများ ကောင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သုံးမရလောက်အောင် အင်တာနက်အခြေအနေက ဆိုးရွားသွားသည်။ ထို့နောက် Telenor ဝန်ဆောင်မှုရောက်လာသောအခါ အင်တာနက်လိုင်းက တစ်ဖန်ပြန်ကောင်းလာပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် မြို့တွင်းရှိ အင်တာနက်ဆိုင်များ အလုပ်မဖြစ်တော့သဖြင့် ပိတ်သွားကြသည်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ MPT လိုင်းကောင်းသည့်အခါ MPT နှင့် အင်တာနက်သုံးရသည်၊ Telenor လိုင်းကောင်းသည့်အခါ တယ်လီနော်နှင့် အင်တာနက်သုံးရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ MPT ရော Telenor ပါ လိုင်းမကောင်းသည့်အခါရှိသည်။ သို့ပေမဲ့ အရင်လို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးသုံးမရလောက်အောင်တော့ မဟုတ်တော့ချေ။ ဒါပေမဲ့လဲ အင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်ပြီးလောဘကြီးသည့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ လက်ရှိလိုင်းက အားရသည်မရှိ၊ ကျွန်တော်စိတ်ရှိတိုင်း လုပ်ခွင့်မရအောင် လိုင်းက အကန့်အသတ်ရှိနေသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်အချဉ်ပေါက်မိသည်။
ထိုအခါ ဆွိဇာလန်သတင်းထောက်ကြီးပြောခဲ့သည့် တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာမှာပေါ့ ဆိုသည့်စကားက ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။ ထိုအခါ အရင်က ကျွန်တော်တို့မြို့လေးရဲ့ ဖုန်းလိုင်းနှင့် အင်တာနက်လိုင်းများ ယခုထက်အများကြီး ပိုဆိုးရွားခဲ့ကြောင်းကို ကျွန်တော်တွေးမိလာသည်။ ထိုအခါ ဒီထက်တဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာမှာပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ရသည်၊ သို့သော် ဆွိဇာလန်သားကြီးလို ကြင်ကြင်နာနာတော့ မဟုတ်၊ ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီးနှင့် .....။
ShwunMi- July 10, 2016 at 10:00 PM
Clicker Nux July 11, 2016 at 9:09 AM
အခုလို လာရောက်ဖတ်ရှု အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း 😊😊😊
Moe Zes August 4, 2016 at 11:01 PM
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလာလည်ပြီးပြီ အခုတခါပြန်လာလည်သည် နောင်လည်းလာလည်ဦးမည် စကားစပ် ဆွစ်ဇာလန်က သတင်းထောက်ဆီက ကင်မရာ လေးသဘောကျ တယ်
ကျနော်က Clicker Nux(ငထွန်း) ပါ။
ကျနော်က အူကြောင်ကြောင် လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာ၊ စာကဗျာရေးသားခြင်း၊ စာအုပ်များစုဆောင်းခြင်း၊ စိတ်ကူးတည့်ရာ တီထွင်ဖန်တီးရခြင်းတို့ကို ဝါသနာပါသည့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့သားဖြစ်သည်။
မြန်မာစာအဓိကနှင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရထားပြီး၊ လက်ရှိတွင် ဖုန်းပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးနေသူဖြစ်သည်။
ငယ်ငယ်က "ကျွဲပါးစောင်းတီး" ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်က တရုတ်ဗမာကပြား၊ နေတာက တရုတ်အိမ်၊ တရုတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ။ မောင...
(၁) ဤရွာအမည်က ခန့်ငြားလှပသည်။ "လူကြီးမင်းများရွာ" ဟူ၏။ တစ်ချိန် တစ်ခါကတော့ ရွာအမည်နှင့် လိုက်ဖက်စွာ ဤရွာ၌ လူတော်လူကောင်းများ န...
တစ်နေ့တစ်၌ … ကျွန်ုပ်လည်း ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့် (မှတ်ချက်။ ။“ပျင်းပျင်း" ဆိုသည်မှာ လူအမည်မဟုတ်ပါ) အပျင်းပြေရန်အလို့ငှာ facebook ကိုဖွင...
တခါကပေါ့ကွာ ဓာရာတိုင်းမှာ ဘောဇဘုရင်အုပ်စိုးနေသတဲ့၊ အဲ့ဘုရင်ကြီးထံမှာ ပညာရှိကြီး ကာလီဒါသ ခစားနေသတဲ့။ ကာလီဒါသဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာရာဇဝင်မှ...
ကဗျာ စာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါး ပုံပြင် ဗဟုသုတ ဘာသာပြန် ဝတ္ထုတို သရော်စာ ဟာသ အတွေးအမြင် အမှတ်တရ
စားကြည့် အားရှိတယ် ...
ကွန်ပျူတာရူးသူ သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကြောင့်ရူးသူ
ကျွန်တော့်အမေ - ၁
လူတိုင်း အိမ်သာတက်လျှင် ဘောင်းဘီချွတ်ရသည်
သင်သိပြီးပြီလား? My Blog, My Memo သီချင်းချစ်သူများ Cool Emerald Maxima on Android - Maxima Burmese kowaizin Violet ၏အတွေးစုလေးများ Lionslayer - The Legend Sony Xperia User Aung Myo Kyaw's Blog Calm Hill - The way of my life ဖူးနုသစ် Tech Pops Kaung Khant Shot's Go on lovely days